Ukuhlolwa Kwesivinini Se-Inthanethi
Kuyini ukuhlolwa kwe-intanethi?
Ukuhlolwa kwejubane le-intanethi kuyinkqubo yokuhlaziya imingcele yokuxhumeka kwe-broadband ngokuthumela ifayela elincane kusuka kuseva nokulinganisa isikhathi esithatha ukulanda bese ulayisha ifayela emuva kuseva. Ngandlela-thile, imingcele efana ne-jitter kanye nokulahlekelwa kwepakethe nayo ingabalwa. Okunye ukuhlolwa kwejubane nakho kuyalinganisa i-ping, okuyisikhathi sokuba umyalezo wenze uhambo oluzungezayo kusukela kumthumeli ukuya endaweni oya kuyo nangemuva, ngokuthumela iphakethe le-Internet Control Message Protocol (ICMP) le-echo isicelo.
Ukuhlolwa kwejubane kunazo zonke kunamaseva amanengi amaningi emhlabeni jikelele, okuvumela umsebenzisi ukuthi avivinye isivinini se-intanethi ezindaweni ezahlukene. Kungcono ukuhlola isivinini ngesiphakeli esiseduze nesiphakeli sewebhu noma isicelo sewebhu esisetshenziswayo; kungenjalo, isivinini esibikiwe asibonakali isivinini sokusebenza sangempela somsebenzisi.
I-ping yinkathi yokusabela kokuxhumeka kwakho-ukuthi uthola ngokushesha impendulo ngemuva kokuthi uthumele isicelo. I-ping esheshayo isho uxhumano oluthe xaxa, ikakhulukazi kuzicelo lapho ukukhipha isikhathi kunakho konke (njengemidlalo yevidiyo). I-Ping ilinganiswa ngama-millisecond (ms).
Kuyini Ukusheshisa Okusheshayo?
Isivinini sokulanda ukuthi ungashesha kanjani ukudonsa idatha kusuka kuseva kuwe. Ukuxhumeka okuningi kuhloswe ukulanda ngokushesha kunalokho abalayishayo, njengoba iningi lomsebenzi we-Inthanethi, njengokulayisha amakhasi wewebhu noma amavidiyo asakaza, aqukethe ukulandwa. Ijubane lokulanda lilinganiselwe kuma-megabits ngomzuzwana (Mbps).
Kuyini Ukusheshisa Okulayishayo?
Ijubane lokulayisha ukuthi uthumela ngokushesha kangakanani idatha kusuka kuwe kwabanye. Ukulayisha kuyadingeka ekuthumeleni amafayela amakhulu nge-imeyili, noma ngokusebenzisa ingxoxo yevidiyo ukuze ukhulume nomunye umuntu ku-intanethi (njengoba kufanele uthumele ukudla kwakho kwevidiyo kubo). Ijubane lokulayisha lilinganiselwe kuma-megabits ngesigamu (Mbps).